Andramo ireo karatra amin'ny Youtube hampitomboana ny fifandraisan'ny mpijery | Martech Zone
Andramo ireo karatra amin'ny Youtube hampitomboana ny fiarahanareo amin'ny mpijery
Alatsinainy, 8 Jona, 2015 Alatsinainy, 8 Jona, 2015 Douglas Karr
Miaraka amin'ny fahitana sy fikarohana marobe toa azy ireo ao amin'ny Youtube, dia toa misy ny fotoana very amin'ny tsy fananana fomba fiovam-po tsara kokoa tafiditra ao anaty horonantsary Youtube. Youtube dia nandefa karatra hitondrana fifandraisana hafa fanampiny izay ahafahan'ny mpamokatra horonan-tsary mampiditra antso-to-hetsika mahafinaritra amin'ny singa slide-in ao amin'ny lahatsarin'izy ireo. Fanamarihana iray - Tsy mandeha ny karatra ankoatry ny fametahana CTA misy ao amin'ny Youtube.
Ity misy topy topimaso momba ny karatra Youtube
Aza hadino ny manindry ny bokotra "i" eo ​​amin'ny zoro havanana ambony raha hijery ny fomba fiasan'ny karatra.
Satria miasa ny Cards na misy miasa amin'ny birao na finday aza, raha tondroinao amin'ny horonan-tsarinao izy ireo dia mety tsy hilahatra araka ny tokony ho izy. Na izany aza, ny bokotra fampahalalana dia aseho tsy tapaka eo amin'ny zoro ambony ambony. Tena tsara izany - manome toky fa tsy miovaova raha misy mijery avy amin'ny Youtube na avy amina horonan-tsary miorina amin'ny tranokala any ho any.
Raha ny marina dia tsy azoko antoka hoe firy ny olona handeha hiezaka hanindry ny bokotra, na izany aza. Mahatsapa aho fa olona maro no tsy hahita an'io mihitsy. Heveriko fa ny fampifanarahana tsaratsara kokoa dia ny fananana fandaharam-potoana izay noterena hijerena ny Karatrao mba hahitan'ny olona azy rehefa tsara ny fotoana. Saingy hey - endri-javatra mahasarika izy io ary dingana iray amin'ny lala-mahitsy. Youtube dia mikasa ny handroso sy hanatsara ny rafitra rehefa mahita ny fomba ampiasana azy ireo.
Afaka misafidy karazan-karatra enina ianao: Varotra, Fanangonana vola, Horonan-tsary, Lisitry ny Playlist, tranokala mifandray ary famatsiam-bola an'ny mpankafy. Raha tsara laza ny kaontinao ary ianao no tompon'ny horonantsary zarainao dia hahita vaovao ianao Cards takelaka ao amin'ny Video Editor anao hamoronana sy fanovana azy ireo amin'ny fotoana rehetra.
Williams-Sonoma sy VISA Checkout Mampiasa Cards Youtube
Visa Checkout ary Williams-Sonoma dia nanomboka fanentanana fiaraha-miasa amin'ny marketing ary andiany horonantsary efatra antsoina hoe Fotoana hankafizana ny fahavaratra ho fanohanana ny fisian'ny Visa Checkout, serivisy fanamarinana an-tserasera haingana sy azo antoka an'ny Visa, ao amin'ny www.Williams-Sonoma.com.
Ny andian-dahatsary dia shoppable miaraka amin'ny Youtube Cards - mamela ny mpijery hividy vokatra aseho haingana sy mora amin'ny fipihana mivantana avy amin'ny horonantsary — fanaovana Visa Checkout, miaraka amin'i Williams-Sonoma, iray amin'ireo marika voalohany nampiasa ny teknolojia. Ireo horonan-tsary dia noforonina niaraka tamin'ny Tastemade, tambajotram-piainan'ny sakafo manerantany ho an'ny sehatra dizitaly, ary ireo influencer voafantina tanana dia hanome toro-hevitra sy fika amin'ny mpijery hampiantrano ireo antoko fahavaratra tonga lafatra.
Amin'ny alàlan'ny Visa Checkout, ny mpanjifa an-tserasera Williams-Sonoma dia afaka mividy izay rehetra ilain'izy ireo hampiantrano ny antoko faratampony —kely amin'ny tsindry vitsivitsy monja.
Tags: Tranonkala mifandraikaantso ho amin'ny hetsikactaFan Fundingfanangonam-bolaampitomboy ny fampiroboroboana ny youtubeLahatsary Marketingentam-barotrany filaharan-kiraYouTubekaratra youtubeyoutube ctampamoaka horonantsary youtube
Fahatanterahana IDS: Serivisy fanatobiana entana sy serivisy fanatanterahana
Vine ve ilay diamondra eo amin'ny sehatry ny varotra sosialy?